Xil-ka-qaadis lagu sameeyay taliye saldhig oo mid ka mid ah askartiisa uu xalay dad dilay iyo waqtiga bandowga oo wax laga badalay - Calanka.com
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa uu xil-ka-qaadis ku sameeyay taliyihii saldhiga booliska degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
Wareegto kasoo baxday xafiiska taliyaha ayaa waxaa lagu shaaciyay in xilka laga qaaday Taliyih Najiib Carab, kadib markii askari ka tirsan ciidanka booliska ee la howlagal saldhiggiisa uu xalay fal dil ah u geystay laba ruux oo shacab ah.
Dhanka kale taliye Xihaar ayaa ka hadlay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee xalay ilaa maanta ka dhacay degmada Boondheere, kuwaas oo ka dhashay dilka askari ka tirsan ciidanka booliska uu xalay ugu geystay degmadaasi laba qof oo shacab ah oo midi aheyd hawweneey umul aheyd.
Taliyaha ayaa ka tacsiyeyay geerida labadaas Marxuum isaga oo shaaca ka qaday in la xiray caddaaladdana la hor keenayo askarigii dilka geystay, waxaana fasiraad uu ka bixiyay waxa uu yahay Bandowga habeenkii ee Magaalada Muqdisho.
Xijaar ayaa sheegay in bandowga uusan aheyn mid saaran dadka, balse loogu talagalay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka Corona ee faraha ba’an ku haya caalamka,
Isaga oo hadlakiisa sii wata ayuu caddeeyay in ay furnaanayaan Dukaamada iyo farmashiyaasha, qof kastana uu doonan karo adeegeeda xilligi ay u baahato.
Dhinaca kale, waxa uu sheegay in wax laga bedelay bandowgii habeenka ee saarnaa magaalada Muqdisho, kaas oo la iclaamiyay in uu dhaqangalo 7:00-fiidnimo, waxaana uu sheegay kadib cabasho is daba joog ah oo ka timid shacabka Muqdisho ay dibugu celiyeen 8:00-fiidnimo,
Waxaana uu dadka ugu baaqay taliyaha marka ay soo dukadaan salaadaha in ay ku nagaadaan guryahooda si aanu sameyn ugu yeelay xanuunka Covid19.